ပါတနာတွေအနေနဲ့ အောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့ အခုလိုမျိုးအကောင်းဆုံးရလာဒ်ထွက်လာအောင်လဲ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြခဲ့ကြပါပြီ.
ဒီနေ့မှာတော့ အနိုင်ရရှိသူ ၃ဦးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်. အနိုင်ရရှိသူတွေရဲ့အမည်ကိုတော့ လောလောဆယ် လျှို့ဝှက်ထားမှာဖြစ်ပြီး မကြာခင်ပဲ အသိပေးကြေငြာပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်. ပထမဆုရရှိသူကတော့ Retina 4K display မျက်နှာပြင်အကျယ် 21.5 လက်မရှိသည့် iMac ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယဆုရရှိသူက မျက်နှာပြင်အကျယ် 13 လက်မရှိသည့် MacBook Air1.6GHz 256 Gb, နှင့် တတိယရရှိသူကိုတော့ ရွှေရောင် iPhone 7s Plus 256 Gbကို ပေးအပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်! ဆုရရှိသူတွေရဲ့အမည်နဲ့ ဆုချီးမြှင့်ပေးအပ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကို အသေးစိတ်သိရအောင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ.